Tilmaamaha Hab-raaca doorashada loo marayo sanadka 2016-ka oo lasoo saaray (Qodobo Muhiim ah) – STAR FM SOMALIA
Madasha Wada-tashiga Qaran ee ku mideesan yihiin Dowlada Federaalka ,Maamul Goboleedyada dalka ka jira iyo Bulshada rayidka ayaa soo saaray bayaan ku aaddan tilmaamaha hab-raaca doorashada loo marayo sanadka 2016-ka.
Bayaanka ayaa u qornaa sida tan
Wuxuu wadatashi toos ah la yeelanayaa dhamman dadka ay arrintu khuseyso ee jooga gobol walba, si loo hormariyo la xiriirka dadweynaha iyo sharcinimada Madasha Wadatashiga Qaranka. Guddiga Taageerada Farsamo (TST) Guddiga Taageerada Farsamo (Technichal Support Team) oo ay garwadeen ka tahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka waxay mas’uuliyad ka saarantahay laba arrimood oo kala ah; a) taageeridda Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ) iyo Guddi Hawleedka (Task Force), b) wuxuuna xaqiijinayaa arrimaha farsamo ee la xiriira Madasha Wadatashiga Qaranka iyo sidii lagu hirgelin lahaa arrimahaas.
Guddigan wuxuu ahaanayaa midka ugu weyn ee talo farsamo siiya Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka, wuxuuna hagid farsamo iyo talo siyaasadeed u fidinayaa Guddi Hawleedka, haddii uu soo codsado, wuxuu soo saarayaa warbixino, qoraallo hordhac ah, wuxuuna bixinayaa taageero la xiriirta sidii loo habayn lahaa Tilmaamaha Habraaca Fududeynta. Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu ka qaybqaadanayaa doodaha siyaasadeed iyo wadahadalka guud ee dadweynaha ee la xiriira geeddi socodka doorashada sannadka 2016.
deeqbixiyeyaasha iyo saaxiibada dhiggooda ah), iyo wixii kale oo warbixinah ee loo baahdo sida warbixinta la siiyo warbaahinta.
Ergo doorasho oo ka kooban dalka oo dhan:
Ergo doorasho oo beel ku saleysan: